Gospel Archives — Trip LEE - OFISIALY SITE
Gospel Gospel Gospel Gospel Gospel Gospel Gospel Gospel Gospel Gospel Gospel Gospel Gospel Gospel
Izany no lahateny Trip ny avy amin'ny ERLC Summit amin'ny Filazantsara sy ny Firazanana Fampihavanana. Ity ambany ity ny sora-tanana avy izany hafatra.
Androany hariva, Aho no nangataka mba hiresaka momba ny millennials sy ny fampihavanana ara-poko. Ary mahatsapa tombontsoa ny hijoro eto sy manompo ao anatin'ny ezaka mahagaga ity mankany amin'ny firaisan-tsaina ao amin'ny fiangonana.
Amin'ny maha-mpiangaly rap, Aho efa ho ampahany be dia be ny rindran-kira nandritra ny taona maro miaraka amin'ny maro ny millennials sy ny olona rehetra tandavan-taona. Ary nahita aho fa ny mozika tena manana fomba mampiray saina ny olona. Misy fampisehoana izay iray ihany ny isan'ny mponina ny olona: angamba izany rehetra moms baolina kitra sy ny fotsy suburban tanora, na tanàn-dehibe rehetra amin'ny oniversite ireo mpianatra, na pasitera batista atsimo rehetra manao khakis (ekena, angamba tsy farany). Fa misy ihany koa ny maro izay misy isan-karazany ny vahoakany rehetra, na tanora na antitra, mainty sy fotsy, ary ny maro hafa vondrona. Ary ny olona izay mitandrina izany matetika talanjona ny fahasamihafana, ary Heveriko fa ny tena zava-tsoa ihany koa.
Raha Izaho no mieritreritra izany mangatsiatsiaka sy mahagaga, Tsy mihevitra izany ho toy manaitra toy ny sasany manao izany ho. Isan'andro misy…
Tsy marina ianao Ampy
Rehetra izao, ary avy eo aho miresaka amin'ny olona iray izay milaza fa te ho tonga Kristianina, nefa toa mihevitra ny fotoana dia tsy tena marina. Raha manontany azy ireo hoe nahoana, izy milaza amiko ny momba rehetra amin 'ny fahotany, ny fahadisoana rehetra, sy ny misavorovoro ny zavatra efa nataony tamin'ny lasa. I tsy miady hevitra aminy momba ny fahotany, fa izaho no hampihemotra indray ny tombantombana.
Izy ireo mihevitra ho manana ho zareo fa mahafeno fepetra fahotana toa anao tsy avy amin'i Kristy, raha ny mifanohitra tanteraka marina. Ny maha-mpanota tsy mitandrina antsika amin'ny Kristy; fa ny antony tokony Azy. Raha toa isika ka miandry mandra-mijery ny hanaiky Azy tanteraka isika ho miandry Ho mandrakizay.
Tamin'ny iray ny toerana tena teny notsongaina, Charles Spurgeon Mampirisika antsika mba tsy mijery ny tenantsika, ary ny manomboka mijery an'i Jesosy. Hoy izy:
"The! Hoy ianao, 'Tsy ampy ny mibebaka.' Izany no mijery ny tenanao. 'Tsy mino ampy.' Izany no mijery ny tenanao. 'Tsy mendrika loatra aho.' Izany no mijery ny tenanao. 'Tsy afaka mahita,', Hoy i hafa, 'Fa manana ny fahamarinana.' Izany dia tena tsara ny milaza fa tsy misy fahamarinana; fa izany dia tena mety ny hijery na inona na inona. It…
Milaza ny olona momba an'i Jesoa dia toa ho iray amin'ireo zavatra rehetra amintsika no mahafantatra tokony hatao, nefa isika rehetra mahatsapa ny tsy manao meloka ampy. Tsara aho? Aho irery izany? Na dia vao tamin'ny herinandro lasa, Mahatsiaro ho voaheloka aho satria ny fifandraisana no nanomboka nanao ny trano iray ny mpiara-monina no karazana nanomboka latsaka eny. Efa tsy mba tahaka iniana araka izay tokony mikasika ny fananganana izany amin'ny fifandraisana, ary ny fanohizana ny miezaka mba hilaza aminy ny momba an'i Jesosy. Ary toa toy ny mahatsapa izany aho matetika. Ny fanontaniana tiako ny hanontany no antony? Inona no fomba fijery fo tokony raikitra? Mila ny saina mba ho havaozina. Tsy maintsy hahatsiaro ny antony aho…
Hatao Ahoana ny Fiainana?
Raha misy misy karazana ny mozika foana ny miresaka momba sy nanenjika mafy ny fiainana tsara, izany hip-hop. I tia hip-hop. Ny nitiavako hip-hop ho an'ny fiainana manontolo. Misy zavatra fotsiny mikasika ny amponga, ary ny Open, ary ny angovo izany nanintona ahy foana amin'ny. Fony aho mbola zatovo, fony aho tsy ao am-pianarana, na matory - na matory ao am-pianarana - aho no nihaino ny toerana tena rappers. I zatra nahantona teo ireo ny teny rehetra, ary izy ireo nanana be dia be ny hoe. Fantatro ny ankamaroan'ny rappers dia tsy miezaka ny ho mpampianatra, fa tsy midika tsy mianatra aho. I nihaino tsara ny heviny momba ny fiainana tsara - ary tiako ny zavatra reko.
Nanana toerana tena hira toy ny hoe "Tsy ny vola na Inona na Inona,"Ary izaho nihaino Albums amin'ny anaram-boninahitra toy ny" hanan-karena, na Maty Christ est mon modèle. "Koa izany tena dia tsy mahagaga raha ny hevitra ny amin'ny fiainana tsara dia manana kitapom-batsy dia nifanizina fa tsy nety na dia akaiky. Tsy rehetra momba ny vola, anefa. Nianatra momba ny hedonism, firaisana, ny fitiavan-karena, tsy fandraisana andraikitra, hakamoana, zava-mahadomelina, ary mahazo fanajana - rehetra toy ny sekely ho ny piozila izay ny…
Inona no atao hoe Filazantsara? avy amin'ny Andriamanitra maniry amin'ny Vimeo.
Clip iray hafa avy amin'ny ny tafatafa tamin'ny Andriamanitra maniry. Nanontany ahy izy ireo raha afaka Rap ny Filazantsara amin'ny 2 minitra. Izany no ezaka
Video an'i Lecrae, Eric Mason, ary Trip
Ity misy lahatsary Lecrae, Eric Mason, ary ahy hop izahay miresaka momba nahatapaka ranjo sy ny Filazantsara
Tantaran'ny Filazantsara Coalition Video an'i Eric Mason, Lecrae, ary aho ry namana ary mifanakalo hevitra momba ny mainty “fanavaozana” teolojia